Oromia: Waamicha Qabsoo Marsaa 3ffaa Qeerroo irraa kenname | Kichuu
Oromia: Waamicha Qabsoo Marsaa 3ffaa Qeerroo irraa kenname
Posted on August 16, 2020 by kichuu_admin
BB$: Waamicha Qabsoo Marsaa 3ffaa Qeerroo irraa kenname
KMN:- Hagaya 16/2020
Uummatni Oromoo sirna abbaa hirree Wayyaaneen mataa itti taatee turte waliin qabsoo hadhaawaa taasiseen of irraa erga garagalchee booda loote-seentuun sirna Nafxannyaa aangoo mootummaa qabattee jirti. Erga sini Nafxanyaa Abiy Ahmed mataa itti ta’e aangoo argattee as Oromoon gidiraa seenaa isaa keessatti argee hinbeekneen hiraarfamaa jira. Haaluma kanaan gartuun Biltsiginnaa yeroo ammaa mootummaa ofiin jedhu Oromoo xiqqeessee Oromummaa balleessuuf akeekaa godhatee jira. Hayyootaa fi qaroon Oromoo hidhaa jiru, hidhaa irraa kan hafan ajjeefamaa, ariyatamaa, akkasumas xiqqeefamaa jiru. Oromoo fi lafa Oromoo qoqqoodanii daldaluun Itiyoophiyaa dhiiga Oromoo dhuguun gabbatte kana tiksuuf yaalu. Abdii uummatni Oromoo mirga heerawaa fayyadamee filannoo dhaan sirna nafxanyaa kana of irraa kaasuuf qabu filannoo karoorfame haqee, Oromiyaa humnaan bulchuuf waraanaa hanga funyaaniitti hidhate uummatatti bobbaasee jira. Maqaa “olaantummaa seeraa” jedhu golgaa godhachuun mana uummataa gubuu, jumlaan ajjesuu, qabeenya saamuu fi shamarran gudeeduu hojii fardii tasifatee jira. Walumaagalatti, Oromiyaan sirna nafxanyaa jalatti kuftee jirti.
Kanaaf, Qeerroon waamicha qabsoo marsaa 3ffaa Kudhalamaan Sadeen (12/12/12) jedhamee moggaafame labseera. Mormiin marsaa 3ffaa kun Kibxata Hagayya 12, 2012 irraa hanga Roobii Hagayya 20, 2012 guutuu Oromiyaa keessatti hojii irra oola. Kaayyoon yeroo gabaabaa qabsoo marsaa kanaa hooggantootaa fi lammiilee Oromoo hidhaman mara hidhaa irraa hiiksisuu dha; yeroo giddu-galeessatti ammoo loltootni mootummaa magaalotaa fi gandoota baadiyyaa Oromiyaa gadhiisanii mooraa waraanaatti akka deebi’an taasisuu dha. Galmi qabsoo Oromoo inni xumura mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu dhugoomsuu akka ta’e yaadachiisuu barbaanna. Kanaafuu, tooftaa sadarkaa qabsoon keenya irra gahe madaluu qeerroon yeroo filatetti kan labsuu waan ta’eef ummatni Oromoo arasaa barbaachiisu kafalee mirgaa isaa guutuu gonfachuuf akka of qopheessu gamanumaan beeksifina.
Haaluma kanaan waamichi qabsoo marsaa haaraa armaan gadii Qeerroo irraa kennamee jira.
Hagayya 12, 2012 irraa eegalee hanga Hagayya 20, 2012 tti daandiiwwan magaalota Oromiyaa walquunnamsiisan akkasumas daandiiwwan Oromiyaa keessa qaxxamuranii
Naannolee ollaa Oromiyaa fi biyyoota alaa walqunamsiisan hundi ni cufamu. Guyyaa uggura daandiiwwanii dheeresuun ykn gabaabssuun barbaachisaa ta’ee yoo argame Qeerroon beeksisa ni kenna.
2.4. Ijaarsa milishoota gandaa dabalatee caasaleen Biltsiginnaa ganadoota magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa keessa maadheffachuudhaan, bilbilaan waraana yaamuudhaan Qeerroo qabsiisuu hojii taasifatanii jiran; dabalataanis, Qeerroo irrati odeeffannoo fi ragaa sobaa kennuu fi qindeesuu irraa akka of qusatan Qeerroon gadi jabeessee akeekachiisa .
2.5. Qeerroon namoota gandoota baadiyyaa naannoo keessaniitti mana jireenyaa kaabinee fi dabballee godinaa, aanaa fi magaalaa akkasumas waajjira gandoota
baadiyyaa kan hogganan, sochii isaanii hordofaa oddeeffannoo waa’ee eenyummaa isaanii adda baafachuudhaan miidiyaa fi ummata Oromootti akka saaxiltan.
3. Namootni kamuu uggurri daandiiwwanii osoo hin eegalin dursanii waan isaan barbaachisu qindeeffachuu akka xumuratan yaadachiifna.
5. Labsii Qeerroon kabaja uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti abba biyyummaa isaa mirkaneefachuuf baase kana cabsuun sochii taasifamu guffachiisuf kan carraaqu hundaaf itti gaafatamummaan kanuma abbaa akka ta’e cimsinee hubachiifna.
2. Manneen barnootaa, buufataaleen fayyaa fi maneen amantaa sochii ugguraa fi fincila
hunda irraa walaba.
3. Sochiin Ambulaansii ugguraan daangeffamuu waan hinqabneef hamma lukkeelee diinaaf tajaajila hinkenninetti socho’uu danda’u.
. Ilmaan Oromoo mootummaa kana keessa jirtaniif;-
. Sirni nafxanyaa amma ijaaramaa jiru Oromoo fi Oromiyaa balleessudhaaf kan kaayyoo godhate waan taheef, ilmaan Oromoo sadarkaa gadii irraa hanga gubbaatti mootummicha tajaajilaa jirtan yeroo murteessaa Oromoon akka sabaatti of baraarudhaaf qabsoo hadhooftutti jirru kanatti gara ummataatti akka makamtan waamicha lammummaa isiniif goona.
. Ilmaan Oromoo, Raayyaa ittisa Biyyaa, Poolisii Federaalaa, Poolisii Oromiyaa, Humna Addaa Oromiyaa fi Milishaa keessa jirtan qabsoo Qeerron irratti wareegamaa jirtu cinaa akka dhaabbattan Waamicha isiniif goona.
. Hayyoota Oromoo hundaaf;-
. Hayyoonni Oromoo yeroon keessa jirru yeroo murteessituu fi hamtuu kan Oromoon akka Oromootti jiraachuu fi dhabamuu gidduu jiru tahuu isaa hubachuudhaan walitti dhuftanii mari’attanii hanga Oromoon abbaa biyyummaa goonfatutti of-kennummaadhaan akka hojjattan waamicha isiniif goona.
. Ummata Oromoo hundaaf;
. Qabsoon Qeerron itti jirtuu kan Oromoo maraa waan ta’eef hirmaanaa hundaa barbaachiisa. Kanaafuu, qeerroo cinaa dhaabbachuun, qabsoo akka finiinsitan waamicha isiniif dabarsina.
. Sabaa fi sablammoota cunqurfamoo hundaaf;-
. Mootummaan Abiyyii Ahmadiin hoogganamu yeroo ammaa sirna federaalizimii sabdaneessaa diigudhaan sirna nafxanyaa durii ijaarudhaaf duula gochaa jiru kana dura dhaabbachuun sabaa fi sabalammoonni cunqurfamoon hundi mirgaa sabaaf sablammotaa kabajsiisuuf adeemsifama jiruu kana keesatti akka wal tuumsiinuuf waammichaa obbolummaa isinii dabarsina.
Qeerroo Bilisummaa !!Bilisummaa fi walbummaa oromiyaa tiif Fakmanna !!
Gamtaan falmanna !!
Tokkummaan Duulla !!
Guutuu oromiyaa tti Guyyaa falfakkaatuun Qabsoo itti muddina.
Guyyaa kibxata 12/12/2012 ALH irraa calqabee falmii cimaa itti mudduuf Qeerroon waliif gallee jirra.
“Hidhamtoota siyaasaa keenya hunda Ni gadlakkisiifana.”
Duula Sirna Nafxanyaa dullatti durii jalatti oromoo kuffisuuf Abiy’n labasame jiru qolannee abbaa biyyumma oromoo Mirkannesuun dirqama oromoo hundaati.
Oromoon marti of qooheessaa!!!
qabsoon kana booda gaggeeffamu Qeerroo fi qarree Oromoo qofaan miti.Oromiyyan kan Oromotaati malee kan nama muraasa qofaa miti.
Halaa Oromiyya fi Oromoon yeroo ammaa kana kessaa jiruu haalaan yaaddessadha, yeroo ittii dhabamuuf jirachudhumafuu yaaddoo kessa nama galshuudha .
Haala kana kessatti ana maltu nadhibe jedhee hirmmannaa Oromiyyaa fi Oromummaa baraaruu irraa dugdda ittii galee dhaabbatee ilaalu jiraachuu Hin qabu.dhallii Oromoo Oromummaa isattin of beeku hundumtti waamicha ammaa godhamuf isa dhumaaf silmmii (nafxanyaa)dhiiga Ilmmaan Oromoo xuuxaa jirtu of irraa buqqisne gatuun ammaa waan ta’eef, waamicha qabssoo isiniif goona.
Dhiiraa, Dubaratii ,Xiqqaa guddaa,Baadiyaa fi Magaalaa utoo Hin jenne Tokkummadhan Oromoon hundumtuu itti hirmaachuun dirqama Oromummati.
Qeerroon fi qarreen beekaf wallalaan (Oromoon hundimtuu) akkasumas abban qabssoo kanaa WBOnis gaachana isaa abbummadhan qabssoo kana gaggessu itti fufuudhan galii isaatif Uummata qophessuniif uummatinnis sochii kana afaan faajii tokko malee harkaa wali qabanne qabssoo fininissun yeroon isaa Ammaa. Ademsii Qabsoo keenya fi Oromoon akka dur miti.Abdii galii kenyaas fagoo akka hintaane qabna.waliin Falmannee bilisa baana.
Qabsoon oromoon kana boodA gaggeeffamu akka kanaan dura wacanii deebi’uu miti .Itti fuffinsan hanga bilisummatti wal irraa hincitu.
Yaroo dhumaaf Qabsoon Boqonnaa Hin qabne fi hanga bilisummaa fi Walabummaatti kan wal irraa Hin cinne waan gaggeessuuf deemnuuf keesumaa ummanni magalaalee dursee of qophissuu qaba. Oromoon hidhannoo qabus Amma baasee Yaroo dhallii Oromoo itti salphate jiru kanaitti dinaa of irraa ittiisudhaf fayyadamuu qaba.
Warri hidhannoo Hin qabnees kana qabu waliin hiriiruu.Meeshaa waraanaa kan aadaas itti fayyadamuu qaba.
Ilmman Oromoo haalaa adda addaatin biyyaa alaa jirtaans dirqama Oromummaa kessan bahaa, kunii dirqama Oromummatti, qoodinni isini irraa egamuu diplomacy and finance support also unity akkasumas yoo danda’ame qamaan ittii hiramchuu dha.
Afaan fajii adda addaa ala irraa mullatu fi bakka hin olletti of maxanssun faraa qabssoo Bilisummaa ta’uu qofaa otoo hintaane ittii gaafatama seenaa jalaa illee nama hin baasu.
Falmiin fuula duaratti gaggeeffamuuf jirus kuni daran cimaa fi ulfaataa dha.Oromoon guutuu Oromiyaa irra jirus, chirichaaroon /kutaan/ Qabsoo gaggeessuu dhaabuudhan,Gamtaadh­an Falmannee Mootummaa Nafxanyaa hundee Hin qabne ,of irraa hundeen buqqifnee Mootummaa Oromoo akka dhaabbannu Abdii qabna,Wabiin sabafi sablammii Oromiyaa kessa jiraatanif waadaa senames yoo nagan nuufan jirachuu fedhii qabatan ni tifkamaf.
Mootummaa ofumaanuu wal diigaa fi raafamaa jirtu kana tokkummaan oromoo akkuma waggoota laman duratti tokkummaan keenya deebi’ee keessaa fi alaa wal hidhee qindoomnaan waan Qabsoon bifa haaraan wal hubiin hojjetamaa waan jiruuf ji’oota muraasaa keessatti Garbummaan hundeen akka Oromoon of irraa buqqisu shakkii Hin qabnu.
Oromoon qabenyaa isaa kan diina Oromoo irratti hirromse Oromoo lafa irraa dugugaa jiru kana du’a isaa saffisisuf qabenyaa isaa yoo irra kute gyyaan dhuma isaa dhihoodha.
• Bishaan Oromiyaa
• Ibsaa Oromiyaa
• Midhan Oromiyaa
• Humnna ilmman Oromoo
• Dinagdde ,gibiraf galii adda addaa kana booda diinni ittiin of hin irroomu.
Kanaafu. Oromoon marti falmachuuf Bakka jirtanitti itti qophaayaa.
Gaafa Qeerroon waamicha goodhe akka gurumuu kannisaa taanuf caasaa diinaa kaabinoota fi gurggurttota Opdo(pp) Ganda keenya keessa jiraattu Gamtaan of irraa diignee Oromiyaa qulqulleessuudhaf bakka jirru haakanu. Dursinee garuu kaabinotti fi gurggurttota OPDO/PP atattamatti Uummataa hiraarsaa turttan dhiifama gaafattani caasaa diinaa uummataa Oromoo kessa dirirsitan akka kuttan isa dhumaatif waamicha Oromummaa.isinif goona.
Yoo gaaffi kanaaf atattamatti dibii hinkennine tarkanffin innii calqabaf innii dhumaa/Dursa utoo Diina/Kaabinoota Opdo pp /bobaa keenya jala jiru caasaa ishii guutumaa guutuutti utoo Hin daganne akka nu fixxee nagana hinjiraattu.
Diigamuun caasaa diinaa tarkkanfii dhallii Oromoo bakka jirutti irratti fudhachuun dirqama. Ormoon uummata Galanaa .
Galaana kana Diina irraatti Yaroo tokko guutuu oromiyaatti irra dhangalaasuun Ni Injifanna.
Injifannoon Uummattaa Oromoof !!!
Waamicha qabsoo Qeerroo marsaa 3ffaa kanarratti guyyaan maaf daangeffame jechuun kan gaafataa jiran hedduu dha. Qeerroon gaaffii kana tilmaama keessa galchuun guyyaan kaa’ame murteessaa akka hin tahinii fi kan itti fufuu danda’u tahuu ibsa keessatti dabalanii jiru, dubbisaa.
OMN Waamicha Qabsoo Marsaa 3ffaa Qeerroo irraa Kenname! HGY 162020